Osaziwayo bendawo basekela imibhikisho yabafundi | Scrolla Izindaba
Osaziwayo bendawo basekela imibhikisho yabafundi
Ababhalise kuMzansi njengoLasizwe, uAKA noPrince Kaybee bonke baphumile ukuzokweseka abafundi ngesikhathi bebhikisha ngezinkinga zokubhalisa emanyuvesi.
Isihlabani sikamabonakude uLasizwe sisungule umkhankaso obizwa nge-#10GoesALongWay ngemizamo yokuthola imali yezitshudeni ezingakwazi ukukhokha imali yokufunda yonyaka odlule.
“Ngikuphonsela inselelo yokuthi ufake osaziwayo nabangani bakho obathandayo ukuze basize ukufaka isandla ngokunikela ngemali eyi-R10 kulo mkhankaso we-#R10GoesALongWay,” ubhale kanje ku-Twitter. Uthe sebeqoqe imali eyizi-R400,000 okwamanje.
“Sebenzisa i-hashtag #R10GoesALongWay. Asisheshise bafundi baseNingizimu Afrika.”
UDJ odumile, uPrince Kaybee weseke izinhlangano zabafundi ngokuhamba nabo ezitaladini empini yabo yemfundo yamahhala.
“Uphi umbhikisho we-#NationalShutdown owenzelwa abafundi namuhla? Ngifuna ukujoyina,” ubhale kanje ku-Twitter.
“Ngigqugquzelwa yizinga lesibindi elikhonjiswa abafundi abamashela imfundo yamahhala, noma ngabe bexhashazwa, beshaywa futhi bedutshulwa ngamaphoyisa. Ubuhlungu babo ubuhlungu bethu.”
Ku-Twitter, ummculi u-AKA ukhombise ulaka lwakhe kwi-SAPS ngokusebenzisa izinhlamvu zangempela nezinhlamvu zenjoloba kubafundi.
“Sengike ngamasha nabafundi phambilini futhi anginankinga nokumasha nabo futhi, kodwa noma imuphi umbhikisho uhlale uholwa ngabafundi nobuholi babafundi, Akuyona indawo yami ukuyiguqula ibe wuhlobo oluthile lomsebenzi wosaziwayo,” ubhale kanje ku-Twitter.
U-Andile Mpisane, umdlali webhola lezinyawo, isihlabani se-reality show ophinde abe umlingisi unikele ngemali eyizi-R10,000 kumfundi ngamunye bamanyunivesithi angama-20 abanesikweletu esivela njalo kusukela ngowezi-2020.
Abafundi bazobe benethemba lokuthi osaziwayo abaningi bakuleli bazonikela ezinsukwini ezizayo.
Umthombo wesithombe: @ZACelebs